एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीय त्रसित ! |
गृह पृष्‍ठ खबर एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीय त्रसित !
एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीय त्रसित !
प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण ३१ , शनिबार ११:१२
ई–साझाकुरा, साउन ३१
महोत्तरीमा एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानियहरु त्रसित भएका छन् । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाको वडा नं. ५ राजपुरमा पाँच घण्टाको अन्तरालमा १६ जनालाई सर्पले टोकेको हो ।
शुक्रबार साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म १६ जनालाई सर्पले टोकेको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजीव साहले सबै प्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । मेयर साहको भनाइअनुसार घरमै हुँदासमेत सर्पले टोक्ने गरेको तर सर्प कसैले नदेखेको उनको भनाइ छ ।
टोकेपछि दुख्दा मात्रै सर्पले टोकेको हो भन्ने थाहा हुने गरेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । सर्पले टोकेका घाइतेहरुकाे बर्दिबासस्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा र सर्पदंश उपचार केन्द्र बन्दिपुरमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुकोे स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको र चिन्ता लिनु पर्ने कुनै विषय नरहेको सर्पदंश उपचार केन्द्र बर्दिवासले जनाएकाे छ ।
यसअघि बिहीबार दिउँसो सोही टोलमै विषालु सर्पले टोक्दा स्थानीय ४५ वर्षीया जैमुन खातुनको मृत्यु भएको थियो । धानखेतमा गइरहेको बेला अचानक सर्पले टोकेपछि उनलाई उपचारको लागि सर्पदंश उपचार केन्द्र बन्दिपुर लग्दै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो ।
पछील्लो पोस्ट सौन्दर्य र स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ आलुको बोक्रा
अगिल्लो पोस्ट कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको ज्यान गयो
वाणगंगा २ मा एमालेका विष्णु पौडेल वडाध्यक्षमा विजयी
पाल्पाको रिब्दीकोटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
सन्धिखर्कमा एमाले उम्मेद्धार विजयी
माओवादी त्यागेर एमाले बनेका सांसदहरूको पद गुम्ने